Fitsaboana zavakanto sy mandala. Manampy antsika handresy ny adin-tsaina ny fomba fahaiza-mamorona | Famoronana an-tserasera
«Tibetan monaci complete no mandala» avy amin'i davdenic dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Tsy misy isalasalana fa lamaody ny mandala nefa inona no tena izy? Inona no dikan'izany?
Voalaza fa izany Ny moanina bodista ao Tibet dia maneho ireo tarehimarika geometrika boribory ireo miaraka amin'ny fasika matevina nolokoana loko voajanahary, noforonina tamin'ny fanorotoroana vato. Mampiasa zavamaneno isan-karazany izy ireo mba hamoronana azy ireo tsara, mandany herinandro. Ity fizotrany ity dia mahatonga azy ireo hahatadidy ny hevitry ny eto sy izao. Asa kanto saro-bidy izay horinganin'izy ireo rehefa vita, ka tadidio fa mihelina ny zava-drehetra amin'ny fiainana ara-nofo, dia misy fiandohana sy fiafarana. Rehefa rava dia averina amin'ny fiaviany ny fasika, manokana amin'ny renirano iray, izay maneho ny tsingerin'ny natiora.
Fa ny tarehin'ny mandala kosa dia lavitra lavitra. Ny endrika mifangaro dia tsy vitan'ny Hindoisma sy bodisma, mampiavaka ny fivavahana sy ny olona hafa koa izy ireo, toy ny tranga misy ny mandorlas sy rosette an'ny Kristianisma, ny chacanas an'ny vahoaka Andes, ny marika Celtic, sns. Fa maninona no io fironana hisolo tena ny rafitra concentric io?
Raha ny filazan'ny psikolojista soisa malaza Carl Jung (1875 - 1961), ny mandala dia noforonin'ny olombelona matetika satria endrika archetype mahazatra izy io, izany hoe lamina na sary ariva manerantany izay azo avy amin'ny tsy fahatsiarovan-tena iraisan'ny rehetra. Ny faribolana dia mariky ny fahatanterahana sy ny fitambarany, maneho mandrakariva ny afovoany sy ny manodidina izay noforonina avy eo afovoany. Araka izany, mazàna isika manao mandala amin'ny fifehezana ny psyche antsika. Izany hoe, mba hampitoniana ny saina be fanahiana sy miely, ny fanaovana an'ity karazana lamina ity dia miteraka endrika fandaminana indray sy fifantohan'ny eritreritra hitranga, ka mampitony ny fihetsem-po.
«Moleskine10» avy amin'ny Hello Angel Creative dia manana lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Ity hevitry ny mandala ity ho toy ny làlana geometrika mankany amin'ny filaminana anaty dia ampiasain'ny psikology maro ankehitriny.
Mahatalanjona ny hevitry ny Art Therapy ankehitriny. Ity fitsaboana ity dia tafiditra ao anatin'ireo fantatra amin'ny anarana hoe Art Therapies (Art Therapy, Dance Therapy, Music Therapy, Theatrical Therapy ...), izay miorina amin'ny fampiasana ny fizotran'ny famoronana amin'ny fidirana an-tsehatra manokana amin'ny fitsaboana, ny fampandrosoana, ny famerenana amin'ny laoniny, ny tanjona amin'ny fanabeazana. ary lava sy ny sisa. Ny zava-dehibe amin'ireo fitsaboana ireo dia tsy amin'ny valiny, fa amin'ny fizotrany. Toy ny tamin'ny moanina bodista, fomba iray hifandraisana indray amin'izao fotoana izao, ankoatry ny fomba fanehoana fihetsem-po sy fahalalana ny tena.
«Fitsaboana ara-javakanto sy fahazazana» an'ny cultura social dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Raha ny fitsaboana ara-javakanto, Plastika arts dia ampiasaina amin'ireto dingana famoronana ireto. Tena mahazatra ny mamorona mandala mandritra ny fotoam-pivoriana, ary koa fandokoana azy ireo. Mihoatra noho ny fandinihana fa ny fizotran'ny famoronana dia miteraka tombontsoa marobe ho an'izay rehetra mampihatra azy, amin'ny maha-reduser mahery setra mafy azy. Ny endrika fisaintsainana azon'ny rehetra atao.
Ary izao satria te-handeha adala manao sary mandalas isika, aiza no hanombohantsika?
Manoro anao aho avelao ny eritreritrao hanidina, haka penina na marika ary manomboka eo afovoany. Avy eo mamorona sosona rehefa tonga ao an-tsaina ny sary. Zava-dehibe ny tsy hibanjina ny fahalavorariana ary hoentina hiala amin'ny sary. Raha vao noforonina ianao dia azonao nolokoina niaraka tamin'ny loko tianao, tamin'ny fampiasana pensilihazo, marika na teknika izay tena tadiavinao. Gaga anao ny valiny ary ho noforoninao manokana izy io. Raha tsy tianao ny misintona azy ireo, afaka mividy boky ianao (misy vahoaka) ary miala sasatra amin'ny fandokoana azy ireo. Fomba iray hafa hankafizana mandala ny fandinihana azy ireo fotsiny, amin'ny endriny sy ny fifandraisana rehetra. Mba hanomezana aingam-panahy anao dia misy mpanakanto mahafinaritra amin'izao fotoana izao izay manolo-tena amin'ny fandokoana mandala. Misidina amin'ny Internet isika afaka mahita olona an'arivony.
Ho fanampin'izany, azonao atao ny mamakafaka lalindalina kokoa ny dikan'ny mandala anao mifanaraka amin'ny loko efa nampiasanao. Ny vokatry ny loko dia mamokatra amin'ny olona koa.
Inona no andrasanao manomboka hanoratanao sary ny mandala?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fitsaboana ara-javakanto sy mandala: ny fomba hanampiana antsika handresy ny adin-tsaina
toñi dia hoy izy:
Ny marina dia tsy maintsy mifantoka be ianao rehefa mandoko azy ka tsy afaka mieritreritra zavatra hafa, ary rehefa vitanao izany dia miteraka fahafaham-po manokana amin'ny hatsarany.
Adobe dia manavao ny Photoshop miaraka amin'ny vaovao manandanja ho an'ny kinova desktop
Curiosities 10 momba ny fiainan'ilay mpanao hosodoko lehibe Van Gogh izay hahatonga anao ho masina